बीपी कोइराला « Image Khabar
Tag: बीपी कोइराला
पञ्चायती इजलाशमा बीपीको ११ दिने अदालती जवाफ र बाह्र वर्ष टिक्न नसकेको व्यवस्था
त्रिगुण मर्यादाले मण्डित मेरो प्रधानमन्त्रित्वको निर्मम समाप्तिको न प्रजातन्त्रको दृष्टिले, न संविधानको दृष्टिले, न राष्ट्रियताको दृष्टिले कुनै पनि औचित्य थिएन । म यति त अवश्य भन्न चाहन्छु । मैले न
आज १०८औं बिपी जयन्ती : नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बिपीको योगदानको स्मरण गरिदै
काठमाडौं । आज १०८औं वीपी जन्मजयन्ती । विसं १९७१ साल भदौ २४ गते जन्मनु भएका बिश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा प्रजातन्त्र
‘नेपाल फर्किँदा मलाई मृत्युदण्ड त हुनसक्छ, तर पनि म फर्कन्छु’–बीपी कोइराला (भिडियो अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं, साउन ७ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चार दशकअघि अमेरिकी पत्रकारलाई दिएको अन्तर्वार्ताको भिडियो क्लिप फेला परेको छ । बुधबार मात्र ३९ औं
बीपीले प्राण त्यागेको घर पार्टी प्यालेसमा परिणत, सम्पदा संरक्षणमा कोइराला परिवारकै बेवास्ता
प्रात भ्रमणमा निस्किने देखि पशुपतिनाथको दर्शनपछि बीपीलाई भेट्न शुभचिन्तकहरूको भीड लाग्थ्यो । घरपरिवारका सल्लाह यही घरमा हुन्थे । घर एउटा परिवारको भए पनि हक सबैको लाग्थ्यो । त्यसो त यो
कांग्रेस राजनीतिको धुरी मासिन लागेकोमा कार्यकर्ताको चिन्ता, विराटनगरमै बीपी बेपत्ता !
अन्य देशमा देशका राजनेताहरूको थातथलो संरक्षण गरिएजस्तै विराटनगरको कोइराला निवासलाई पनि त्यही रूपमा विकास गरी आन्तरिक र वाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाउनु जरुरी छ ।
काठमाडौं । बीपी कोइरालाको आत्मवृतान्त लाई जापानीज भाषामा अनुवाद गरी जापानमा प्रकाशित गरिने भएको छ । प्रकाशन अधिकार रहेको संस्था जगदम्बा प्रकाशन र बीपी विचार राष्ट्रिय समाज नेपालको अनुरोधमा आत्मवृतान्तलाई
प्रजातन्त्रका सहयोद्धाहरु ! मुलुुक जोगाउन एकताबद्ध होऊ
हरिविनोद अधिकारी नेपाली माटोमा यो आधुनिक कालमा एकजना दूरद्रष्टा नेता पनि थिए भनेर आजको पुस्ताले सम्झने नाम भनेको नै बीपी कोइरालाको हो । चाहे २००३ सालमा राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापनामा होस्
कांग्रेसले आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै
काठमाडौं, पुस १६ । नेपाली कांग्रेसले बिहीबार (आज) ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस’ मनाउँदै छ । पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायतका नेताहरु लामो निर्वासन अन्त्य गरी भारतबाट स्वदेश
काठमाडौं, कात्तिक ९ । नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमामा आयोजना गरिँदै आएको चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान समारोह यस वर्ष नगर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण यही कात्तिक
मधेश प्रदेशम सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले जित्ने लगभग निश्तित भइसकेको छ । मतभारलाई हेर्दा एमाले र लोसपा भन्दा सत्ता गठबन्धनका पाँच दल बलियो देखिएका
सुनको मूल्य तोलामा हजार रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बुधबार ९२ हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको सुनको मूल्य बिहीबार तोलामा १ हजारले
अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीति र सैन्य खतरा, खतराको रेखामा पुगेको भन्दै अब उपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै नेता उनले दीर्घकालीन टकरावको लागि तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ